PVC Wood Plastika Door Board Production-dalana - China Qingdao JBD milina
PVC Wood Plastika Door Board Production-dalana,
Mampiasa ny tarika manokana natao bongo kambana-visy extruder, DC-dehibe haingana tarihiny sy ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana. Manana tombony ny maro be ny hafainganam-pandeha fitsipika, mazava fanaraha-maso ny hafanana, mety sy azo antoka fandidiana. Ny mpanampy milina dia ahitàna ny banga endriky-namorona vondrona, nahatan-milina, nanapaka milina sy ara-nofo-mitondra filanjana azy. Ny lehibe ampy fitaovana maintsy hihena ny fametrahana rafitra grantees vokatry ny profil fitaovana. Crawler-karazana sary milina mandany ny marina sy ny fitaovana maotera inventer izay miavaka amin'ny tsara rafitra, matanjaka sy mafy orina sary ability.etc. Ny fanapahana dia nasongadina amin'ny alalan'ny milina azo antoka sy marina miasa vokany. Ny mitsingevana sariety sy ny fiarovana manokana fingotra sosona dia mifatotra amin'ny fitaovana toe-mitondra, izay mandray anjara amin'ny fahamendrehan 'no-manao sy mora fandidiana. Ny vondrona auxilary dia fehezin'ny ordinatera-maso programmable rafitra an-trano na hafa malaza programmable maso rafitra an-trano na hafa malaza mpitandrina, izay mitondra ho amin'ny fifehezana sy ny fahamarinan-toerana reliablility.
Pamokarana io dia manana tena azo ianteherana Output avo ela velona ny tena elektrika faritra ireo fitaovana nafarana vokatra izay vokarina manana ny sakany: 500-1000mm hatevin'ny: 20-40mm malamalama ambonin'ny coating taorian'ny tarehy tsara tarehy no tsara indrindra ravaka fitaovana
Max. Sakan'ny vokatra (MG) 600 800 1000 1250
Extruder modely SJZ80 / 156 SJZ80 / 156 SJZ92 / 188 SJZ92 / 188
Max. Extrusion fahaiza-(kilao / h) 360 360 600 600
Extruder fahefana (KW) 55 75 110 132
Hihena ny rano (m³ / h) 12 13 15 18
Compressed rivotra (m³ / min) 0.5 0.6 0.8 1
Wood-plastika sombin-javatra birao no tena ampiasaina ao amin'ny biraom-rindrina, siding, decking zana-kazo, famonosana sy ny fitaovana miaraka amin'ny fitambaran'ny ny pallets, fanorenana hazo, fitahirizana racks, sisintany ihany koa ny manao haingon-trano, fefy, stair handrails sy ny sisa.
Raha mijery Shina PVC hazo plastika varavarana biraom-pamokarana, vidiny, vola, amidy, na PDF, Aza misalasala mifandray aminay, isika dia iray amin'ireo mpitarika PVC Wood Plastika Door Board Production-dalana, Varavarana Board Production-dalana, PVC Door Board Production-dalana, mpanamboatra sy ny mpamatsy.
Previous: PE Hollow Grid Sheet Production-dalana,
Manaraka: XPS Heat Insulation Foamed Production Plate-dalana,
Heat Insulation Foamed Plate Manao Machine
Pe P Abs matevina Board Manao Machine
Pe P Abs matevina Board Production-dalana
Plastic fitaovana Board
Plastic Board milina
PVC Board Production-dalana
PVC Wood Board milina
PVC Wood milina
PVC Wood plastika sosona sombin-javatra Board Production-dalana
PVC Wood Plastika Door Board Manao Machine
PVC Wood plastika Door Board Production-dalana
Board matevina Manao Machine
Wood Plastika Board Production-dalana,
Wood plastika Composite Machine
Wood Plastic Composite milina
Wood plastika Line Price
Wood plastika Machine
Wood plastika milina
Wood Plastika Production-dalana
Wpc Board Manao Machine
Wpc Board Production-dalana
Wpc Pe Board Production-dalana
Xps Heat Insulation Foamed Plate Production-dalana
PVC Wood Plastic Profile Production-dalana,
PVC Door Board Production-dalana,
PE WPC Decking Profile Extrusion Production-dalana,
PE Wood Plastic Profile Production-dalana,
PE Wood Profile Extrusion-dalana,
PVC PE Profile Extrusion-dalana,